Waxa ay warar dheeraad ahi ka soo baxayaan qaraxii maanta ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama ee Magaalada Muqdisho, qaraxani oo gaystay khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac isugu jirta.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, ayaa galaaftay nolosha toddobo ruux iyo dhaawaca 15 kale, balse Axmed Maxamed Maxamuud (Sayid Carab), Afhayeenka Wasaaradda Amniga, ayaa Warbaahinta u sheegay in shan qof ku dhimatay qaraxaasi, toban kalana ay ku dhaawacantay.
Afhayeenka ayaa sheegay inay ka xun yihiin in maalinta kasta ay Shabaabku dhibaateeyan shacabka Somaliyeed, ayna dhibsanayan waxyeelada ay u gaysanayan bulshada.
“Waan ka xunahay, waan ka tiiraanyaysanahay, waana dhibsanaynaa shacabkeena inay maalin walba khasaaro u gaystaan qolodaas burcad diimeedka Shabaabka loo yaqaano.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga.
Waxaa uu soo hadalqaaday in goobta uu qaraxu ka dhacay ay ku sugnaayeen dad rayid oo keliya, isagoo meesha ka saaray in qof ka tirsan dowladda uu goobtaasi joogay, xilligii uu qaraxu dhacayay.
“Maanta waad u jeedeen meeshaas qof masuul ah ma joogin, qof dowladda ka tirsan ma joogin, waxaa joogay shacabka Somaliyeed oo ganacsigoodii watay, baabuurtoodii raaxada watay, ayay nimankaa iyaga ah beegsadeen.” Ayuu yiri Axmed Maxamed Maxamuud.
Sayid Carab, ayaa tilmaamay in ciidamada ammaanka ay xoojiyeen amniga Magaalada Muqdisho, balse waxaa uu qiray in cadowgu uu xilliyada qaarkood gaysan karo falal liddi ku ah nabadgelyada.
Xilligii uu qaraxu dhacayay, ayaa waxaa la sheegay in gaarigii qarxay uu si caadi ah ugu socdaalayay inta u dhaxeyso Saldhiga Booliska Degmada Waaberi iyo Hotelka Maka Al Mukarama.
August 2, 2017 tuugahaladilo2015